'Kudonha kweImba yaUsher' Nyaya Dzakateerana NaEdgar Allan Poe Nhau Kuuya KuNetflix - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau 'Kudonha kweImba yaUsher' Series Yakateerana NaEdgar Allan Poe Nhau Kuuya kuNetflix
'Kudonha kweImba yaUsher' Series Yakateerana NaEdgar Allan Poe Nhau Kuuya kuNetflix
by Anthony Pernicka October 6, 2021
by Anthony Pernicka October 6, 2021 10,176 maonero
Kukwira kumusoro kubva pakubudirira kwe Pakati pehusiku Misa, Mike Flanagan uye timu iri kumisikidza yavo nyowani nyowani nekutenderera hofori yeNetflix. Iyo nyowani yakatemwa yakateedzana Kuwa kweImba ya Usher ichave yakateedzana zvichibva pamabasa akasiyana siyana naEdgar Allan Poe.
Izvo chaizvo izvo izvo zvatinogona kutarisira kubva kune akateedzana zviri kuchengetwa zvinyararire izvozvi. Isu tinoziva kuti Netflix yakaraira zvikamu zvisere zvekugadzirwa kweMike Flanagan.
Mike Flanagan (kurudyi) uye Anotya Mifananidzo mudiwa Trevor Macy (kuruboshwe) kuenda kunovhenekwa kweFlangan's ichangoburwa yeNetflix nhepfenyuro, Mid Mid Misa Mufananidzo: Rachel Murray (Getty Images)
Flanagan akagadzira akateedzana uye anoshanda semugadziri mukuru padhuze naTrevor Macy pasi peVanotya Mifananidzo banner. Flanagan ichatungamirawo zvikamu zvina zvezvakateedzana. Emmy Grinwis naMichael Fimognari vanozoitawo zvigadzirwa zvepamusoro, naFimognari achitungamira zvikamu zvina. Asina kutya Mifananidzo 'Melinda Nishioka anozobatana-mukuru kugadzira. - Variety.com
Izvi zvinogona kuve imwezve yakarova mumutsara weakabudirira akateedzana Flanagan uye Anotya Mifananidzo akaunza kuNetflix. Vapfuura fan fan vanosanganisira Kuputika kweGomo reimba, Kufambisa kweBly Manor, uye ichangoburwa Pakati pehusiku Misa.
Kusiyana-siyana zvakataurwa chete kuti Kusatya kuri kugadzirirawo kuteedzana kwe Mid Mid Club novel seNetflix nhevedzano. Kune munhu ane ruzivo rweiyo projekiti, Kuwa kweImba ya Usher chichava chakamira chakateedzana uye hachizove nechero chinongedzo kune yapfuura Vakashinga nhevedzano. - Variety.com